”Yaynaan cidna ka caraysiinin!” – Malawi uu muujisay inaanu weli ka dhowayn aqoonsi ay siiyaan Somaliland & aqoonyahankooda oo taa ka digaya | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Yaynaan cidna ka caraysiinin!” – Malawi uu muujisay inaanu weli ka dhowayn...
”Yaynaan cidna ka caraysiinin!” – Malawi uu muujisay inaanu weli ka dhowayn aqoonsi ay siiyaan Somaliland & aqoonyahankooda oo taa ka digaya
(Lilongwe) 22 Dis 2020 – Wasiir Dibadeedka Malawi, Eisenhower Mkaka, ayaa dhowaan isagoo wata dayuuradda Malawian Airlines booqasho rasmi ah ku tegey Somaliland, isagoo halkaa kula kulmay MW Muuse Biixi.
Yeelkeede, aqoonyahanka Malawi ayaa haatan ka digaya in Malawi ay faraha la gasho muranno caalami ah, iyagoo booqashada lafteeda ku tilmaamay ”khalad diblomaasiyadeed, sida uu qorayo Nyasa Times.
Rafiiq Hajat, oo ah Malawian gayfane siyaasadeed iyo mid xuquuqul insaan ah, sidoo kalena Agaasime ka ah Institute of Policy Interaction (IPI), ayaa Dowladda Malawi usoo jeediyey inay ka fogaato aqoonsiga Somaliland.
”Malawi oo ah dal dhaqaale ahaan ku xiran Galbeedka iyo hay’aadkooda Bretten Woods (Bankiga Adduunka & IMF), waa inay laba jeer ka fikirtaa cidda ay la xiriirayso, si aanay uga caraysiinin kuwa na taageera.” ayuu yiri Hajat.
Yeelkeede, Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaarad Dibadeedka Malawi, Lucky Sikwese, ayaa woxoogaa hoos u dhigay filashada aqoonsiga, isagoo isku difaacey inay caadi tahay in lala kulmo Somaliland oo ay QM iyo Midowga Afrikaba la kulmaan.
”In la kulmo waa hab-raac caadi ka ah dunida. Go’aankii aannu qaadanno kaddib kulankan ayaa muhim ah.” ayuu ku dooday, isagoo muujinaya in aanay weli caddayn qiyamka ay siinayaan Somaliland.
Onjezani Kenani, oo ah gayfane dhanka baraha bulshada ah oo dalkaa caan ka ah, ayaa isna tibaaxay in Wasiir Mkaka uu ku siraystay in Malawi aanay weli qaadanin go’aan rasmi ah oo ay kaliya Hargaysa u tageen ”qaab xaqiiqo raadin ah.”
Somaliland oo 91-kii sheegtay inay ka go’day Somalia, weli ma jiro hal dal oo la aqoonsan yahay oo siiyey aqoonsi rasmi ah.
Previous articleCabsi ka taagan Maamulka Wajeer kaddib markii jidka lasoo dhigay madaxa nin Kaaliye-xigeen ahaa
Next article”Fadlan dhaqso nooga guur!” – Dadka reer Mandheera oo ka caroodey hadal kasoo yeerey Cabdirashiid Janan (Daawo)